‘अब दबाबबाट मुक्त भएर मिस वर्ल्ड फिनालीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु’ – Nepal Press
मिस नेपाल वर्ल्डसँग संवाद
२०७८ पुष १७ गते १८:१२
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीले संसारका ठूला इभेन्ट अनिश्चितजस्तै छन् । तरपनि, कालो बादलमा चाँदीका घेराको सुखद आशामा नयाँवर्ष सन् २०२२ लाई स्वागत गर्न विश्व जुटेको छ ।
चर्चा गरौं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको । विश्वकै सर्वोच्च सुन्दरी प्रतियोगिताको ७० औं संस्करणको ग्रान्ड फिनाली अमेरिकी टापु राज्य पुएर्तो रिकोमा गत पुस १ गते आयोजनाको तयारी थियो । तर, भाइरस संक्रमणले फिनाली रोकिएन मात्र प्रतियोगितालाई नै धकेलिदियो ।
यदि भाइरस महामारीको अवस्थामा सुधार भए आगामी मार्च १६ अर्थात चैत २ गते मिस वर्ल्डको ग्रान्ड फिनाली हुने योजना छ । फिनालीको एकदिनअघि प्रतियोगिता नै स्थगित गरिएपछि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुगेकी नम्रता श्रेष्ठ अहिले स्वदेश फर्किएकी छिन् ।
अन्तिम ३० भित्र प्रवेश गरेकी नम्रताले यसैसाता नेपाल प्रेससँग खुशि बाँडिन् । अमेरिकाबाट फर्किएर एकसाता घरमै आइसोलेसनमा बसेकी नम्रताको अबको ध्यान मिस वल्र्डको फिनालीमा कसरी उत्कृष्ट प्रस्तुति दिने, तयारी र उत्साहलाई कसरी कायम राख्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।
साथै, नेपालले अघिल्ला संस्करणमा जित्दै आएको दुईवटा विधाहरु ब्यूटी विथ पर्पस र मल्टिमिडिया विधामा पनि जितलाई निरन्तरता दिनुमा नम्रता केन्द्रित हुनुपर्नेछ ।
फिनालीको एकदिनअघि उनले कस्तो महसुस गरिन् ? उनको जवाफ छ : पहिले उत्साहसँगै दवावमा पनि थिएँ । तयारी गरेकी थिएँ । त्यो समय मेरा लागि आँखा खोल्ने क्षण थियो । अब दवावबाट मुक्त भएर जान्छु । अहिले तयारी गर्न समय छ । पहिलेजस्तो दवाव छैन ।’ तर, नम्रता स्वयमलाई लाग्छ उनले मेन्टालिटीमा फरक ल्याउनुपर्छ । ‘पहिले दवाव र डर थियो । अब जाँदा प्रेसर चाहिँ हाल्दिन । लजु ढंगले जान्छु’ उनले आफू मानसिकरुपमा कसरी तयार हुनुपर्छ भन्नेबारे बोलिन् ।
अश्चितता, आउँदो फिनाली, प्रतिस्पर्धा र अपेक्षाको दवावबीच नम्रताले आगामी फिनालीमा कस्तो तयारी गर्लिन् ? यी आयाममा रहेर नम्रताले हालैको एकदिन हिडन ट्रेजरको ललितपुरस्थित कार्यालयमा नेपाल प्रेससँग भलाकुसारी गरेकी छिन् ।
प्रकाशित: २०७८ पुष १७ गते १८:१२